Ciidamada Itoobiya oo ka baxay deegaan cusub oo ka tirsan Gobolka Hiiraan – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka ciidamada Itoobiya ee ka baxay deegaanka Ceel Cali ayaa u ruuqaansaday dhinaca deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Ciidamadii dowladda Soomaaliya ee deegaanka ku sugnaa ayaa iyana isaga baxay, markii ciidamada Itoobiya iyo gaadiidkooda dagaalka ka ruqaansadeen deegaanka.
Dadka deegaanka Ceel Cali ayaa sheegaya inay lama filaan ku aheyd ka bixitaanka Ciidamada Itoobiya, halkaasoo aheyd goobihii dagaalada culus ka dhaceen ka hor inta aanay la wareegin.
Ka bixitaanka deegaankan cusub ee Ciidamada Itoobiya faarujiyeen ayaa la ogeyn ujeedka ay uga baxeen, hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa isa soo tarayay deegaanada ay ka baxayeen ciidamada huwanta ah.
Ciidamada Itoobiya ayaa horay u faarujiyay deegaano ka mid ah Gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Bakool.
Amisom oo bilaabeysa bixinta Magdhaw ku aadan dadka rayidka ee Somaliya ay ku dileen
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta mugud oo si wayn looga barakacay